Wararka | SOMALISTATE.COM
No comments NEW YORK – Waaxda u qaabilsan Qaramada Midoobay (QM) gargaarka degdega ah ayaa go’aansatay in ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya lagu caawiyo $18.5 milyan si wax looga qabto abaaraha aadka u daran ee ka jira gobolka.
Madaxa QM u qaabilsan hawlaha gargaarka, Stephen O’Brien, ayaa sheegay inuu dhawaan booqaday gobolka islamarkaana dareemay raadka ay abaartu ku leedahay dadka halkaas ku nool iyo sida ay u baabi’isay. Masuulka ayaa sheegay inuu lacagtan si degdeg ah u fasaxayo maadama wakhti lumaa uu ka dhigan yahay nolol lunta.
Ismaamulka Soomaalida ayaa la silicsan abaaro soo noqnoqday oo 3-dii sano ee u danbaysay ka jiray gobolka. Abaarta ayaa dadka reer guuraga ah aad u naafaysay iyada oo xoolihii dhamaadeen islamarkaana dadka qarka u saaran yahay in macaluul loo le’edo.
Xukuumada Addsi Ababa iyo maamulka Jigjiga ayaa sheegay inay maalaayin birr u qoondeeyeen dadka taabalysan iyada oo TV-ga ESTV laga sii daaye muuqaalo muujinaya raashin iyo biyo dad kooban loo qaybinayo.
Waxgaradka gobolka ayaa dawlada ku dhaliilaya hawlaha gargaarka oo aad u yar islamarkaana wakhti la baaba’ay la bilaabay. Waxaa jira xogo sheegaya in xukuumadu aynaa baaqi loo baahna jeedin xilligiisi.
Warbixinta QM ayaa lagu tibaaxay in dad gaadhaya 785,000 ay ku sugan yihiin xaalad qalafsan iyaga oo la rafaadsan gaajo, macaluul iyo biyo yaraan. QM ayaa shaaca ka qaaday in gobolka Soomaalidu yahay ka ugu daran dalka oo idil marka la eego baaxada abaarta.
QM ayaa xustay in deeqdan tahay faladh yar oo loogu talagalay waax gaar ah, balse loo baahan yahay gargaar intaa ka badan si wax looga qabato abaar saameysay dad gaadhaya 5.6 milyan oo ku baahsan Itoobiya oo idil.
Waaxda Itoobiya u qaabilsan gargaarka aadanimo ayaa sheegtay in lo baahan yahay aduun dhan $948 milyan si loo quudiyo dadka ku tabaaloobay abaaraha.
No comments ADDIS ABABA – Mashaariic ka badan 50 oo isugu jirta dhismayaal, jidad iyo horumarinta biyaha ayaa dib uga dhacay xiligii loo qoondeeyey in la ebyo islamarkaana ku kacay kharash ka badan kii loo qoondayey.
Hay’ad qiimeysa mashaariicda oo lagu magaacabo CoST ayaa tilmaantay in dib-u-dhaca iyo kharashka kordhay ka yimid habka loo qorsheeyey mashaariicda.
Waxaa qiimeyn lagu sameeye mashaariic kala ah 32 wado, 10 dhismo iyo 10 mashruuc oo la xidhiidha horumarinta biyaha. Qiimeynta oo maanta la soo bandhigay ayaa lagu ogaaday in lacagta ku baxaysa mashariicda biyaha ay dhaaftay qiimihii loogu talgalay 175.7%; qimihii loo qoondaye jidaka ayaa isna kor u kacay 42.1%, halka mashaariicda dhismuhu kor u kaceen ilaa 16.4%.
Inkastoo qimeyntu sababta ugu weyn ee dib-u-dhaca iyo korodhka qiimaha ku sheegtay wax la xidhidha qorsheynta iyo nakhshadaynata mashaariicda, haddana dadweynaha Itoobiya ayaa tuhunsan in qodobka ugu muhiimsan yahay musuqmaasuqa baahsan ee dalka ka jira.
Waxaa xusid mudan, inay jiraan boqolaal mashruuc oo dawladu wado kuwaas oo xiligii loogu talagalay dhaafay islamarkaana lacagihii loo qoondeeye kuwa ka badan ku kacay.
No comments MUNICH – Wasiirka arrimaha dibada ee Itoobiya, Worqnih Gebeyehu, ayaa amaanay sida nabada ah ee doorashadii madaxtinimada Soomaliya u dhacday.
Wasiirka oo ka hadlaye shirkii amaanka aduunka ee ka socda Jarmalka ayaa sheegay in doorashadii Soomaaliya dhawaan ka dhcady tilmaan u tahay inuu dalku hanaqaaday. Worqnih ayaa sheegay in arrintan guul u tahay Soomaalida iyo beesha caalamka ee daneysa deganaanshaha iyo amaanka Soomaaliya.
Dawlada Itoobiya ayaa faraha kula jirta arrimaha Soomaaliya tan iyo intii xukuumadii Siyaad Barre dhacday. Xukuumada Addis Ababa ayaa xidhiidh dhow la leh qaybaha ay dawladii Soomaaliya u xuub-siibatay oo kala ah maamul-goboleedyada kale duwan iyo xukuumada federaalka ah ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Waxaa jira dareen guud iyo rajo ay Soomaalidu ka qabto madaxweynaha cusub in uu ku guuleysto sidii loo yareyn lahaa faragalinta wadamada dariska ah ee arrimaha Soomaaliya, laakiin weli ma cadda sida taas ugu hirgali karto.
Wasiirka Itoobiya ayaa beesha caalamka ka codsaday in Soomaaliya laga taageero dhanka dhaqaalaha iyo loojistikada si loo yareeyo khatarta ka iman karta Alshabaab ee ku wajahan Soomaliya iyo ciidamada AMISOM.
Wafdiga Itoobiya ayaa beesha caalamka xusuusiye sida ay lama huraan u tahay in la xoojiyo xoogaga amaanka ee Soomaaliya oo sida uu xusay u baahan dhaqaale, aqoon iyo xirfad. Hadalka wasiirka ayaa u muuqda mid taageeraya ballan-qaadki madaxwenaha cusub, Maxamad Cabdullahi, oo sheegay inuu ahmiyad siinayo dhismaha xooga dalka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa tibaaxay in dalkiisu sii wadayo iskaashiga uu la leeyahay Soomaaliya isaga oo si gaar ah u ballan-qaaday inay xukuumadiisu madaxweynaha cusub la shaqayn doonto.
Soomaalida ay wadaninimadu ku dheehan tahay ayaa marksata shaki ka muujisa Itoobiya iyo dadaalkeeda Soomaaliya iyaga oo rumaysan in Addis Ababa ayna arrinta daacad ka ahayn islamarkaana faraha ugula jirto Soomaaliya si ay danheeda u gaarka ah u fushato.
No comments ADDIS ABABA – Madaxwene Cumar Geele iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa bisha soo socota booqasho ku soo gaadhaya Itoobiya isaga oo la kulmi doona ra’isulwasaare Hailemaraim. Booqashada ayaa salka ku haysa sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiidhka labada wadan.
Waxaa la filaya in labada dal kala saxeexdaan heshiis dhigaya in si wadajir ah loo sameeyo shirkad maareysa adeega tareenka isku-xidha oo dhawaan xadhiga laga jaray.
Shirkad ee leedahay dawlada Shiinuhu ayaa dhistay wado taraan oo iska xidha Itoobiya iyo Jabuttui taas oo ku kacday aduun dhan $3.5 bilyan. Tareenka oo ah kii noocisa ugu horeeye ee laga hirgaliyo Afrika ayaa ku shaqaeeya elektrik. Adeega cusub ayaa aad u soo gaabiye wakhtigii dheera ee loo kala guushi jiray Addis Ababa iyo Jabuuti oo ahaa 3 maalmood, halka tareenka cusub ay ku qaadaneyso 12 saac oo kaliya.
Dakada Jabuuti ayaa aad muhiim ugu ah Itoobiya iyada oo %95 kala soo degta islamarkaana ka dhoofisa badeecadaheeda.
No comments MUNICH – Wasiirka arrimaha dibada ee Itoobiya, Worqnih Gebeyehu, ayaa maanta la kulmay xoghayaha arrimaha dibada ee Britain – Boris Johnson. Kullanka labada masuul oo ka dhacay Munich, Germany, ayaa lagu soo qaado sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiidhka ka dhaxeeya labada dal.
Worqnih ayaa dawlada Ingiriiska ka codsaday inay si wadajir ah uga shaqeeyan arrimaha caalamka, gaar ahaan hawlaha nabadaynta ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa kale oo xusay in la iska kaashato go’aamada Qaramada Midoobay maadama Itoobiya ka mid tahay wadamada xubnaha ka ah sanadkan gollaha amaanka.
Xoghayaha arrimaha dibada ee Ingiriiska ayaa dhankiisa ka tibaaxay in dakiisu sii joogtayn doono cilaqaadka ka dhaxeeya labada wadan. Waxaa kale, oo Itoobiya ugu baaqay in wafdi heer sare ah u soo dirsato shir heer caalami ah oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya kaasoo ka dhacaya bishi May London.
Docda kale, Itoobiya ayaa Britain ka codsatay inla tixgaliyo in safaarada Ingiriiska ee Addis Ababa ee fissiyinka siiso muwadaniinta Itoobiya iyo shaqaalaha kale ee caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Addis Ababa.
Wafdiga Itoobiya ayaa Jarmalka kaga qaybgalaya shir caalami ah oo lagaga xoojanayo amaanka aduunka.
No comments MUQDISHO – Ugu yaraan 39 qof ayaa ku dhimatay, halka 50 ku dhawaacantay qarax ka dhashay gaadhi laga soo buuxiye waxyaabaha qarxa oo uu widay qof ismiidamiye.
Duqa degmada Wadajir, oo ah meesha qaraxu ka dhacay, ayaa sheegay inuu qaraxa lala beegsaday suuq aad u camiran xilli ay dadku dukaamaysanayeen.
Qaraxa oo ahaa kii ugu xooga badnaa ee dhaca intii la dooratay madaxweyne Maxamad Cabdullahi-farmaajo ayeyna masuuliyadiisa weli cidna sheegaan, laakiin waxaa loo ekeysinaya falal argagixiso oo Alshabaab horey uga fulisay caasimada. Alshabaab ayaa dhawaan ku goodiday inay kor u qaadeyso werarada ka dhanka ah xukuumada Soomaaliya.
Mid ka mid ah dhakhaatirta isbadalka Madina, C/qadir C/raxman, ayaa xusay in 47 qof oo ka mid ah dhaawici lagu dabiibayo isbitaalka.
No comments ADDIS ABABA – Xisbiga haya talada Itoobiya, EPRDF, iyo 21 xisbi oo kale ayaa badhtimhii toddobaadkan ku heeshiye inla diyaariyo goole si wadajir ah loogaga doodo xaalada siyaasadeed ee dalka. Ururada isu yimid ayaa dajiye xeer weli qabyo ah oo qeexaya sida loo wada shaqayn karo.
EPRDF ayaa dhawaan ballan-qaaday inay kor furfurnaan siyaasadeed muujin doonto islamarka asxaabta mucaaradka ah ;a tashan doono.
Ururarada ay ay EPRDF la shirtay ayaa ah kuwo aan awood lahayn oo inta badan la maqlo xiliyada doorashadu soo dhowadahay ama dawladu dano ka leedahay.
Waxaa jira cadaadis soo foodsaray ururka talada haya tan iyo intii mudaharaadyada kacdoonada wata ay dalka ka curtay muddo laga joogo dhawr iyo toban bilood. Dadweynaha Itoobiya ayaa dareenkooda ku muuiye mudahaaradyo markii dambi isu rogay gacan ka hadal oo lagaga cabanayo in talada dalka ay qoomiyada Tigreegu maroorsatay.
Dawlada ayaa qaaday talaabooyin lagu xakamayanyo mudaharaadyada iyo cadhada dadka gadoodsan. Waxaa la soo rogay xukun degdeg ah oo mamnuucaya inla mudaharaado iyada oo dhanka kale la gooye adeega interneta iyo TV-da ku hadla afka mucaaradka.
Sidoo kale, EPRDF ayaa isku-shandhayn ku samsay gollaha wasiirada iyo maamulada Axmaarada, Dhabuubka, Oromada iyo Tigreega oo ah kuwa ku bahoobay ururkaas.
Isbadalada dawlada ayaa u muuqda kuwo aan qancin shacabka islamarkaana soo jiitay cadho hor leh markii ugu yaraan 25,000 xabsiyada la dhigay. Waxaa intaa dheer, in goobaha qaarkood ay ka dilaceen dagaalo ay wadaan jabhado hubaysan.
Xeerka qabyadaha ee ururada isu yimid dhigteen ayaa la sheegay in lagu ansixin doono kulmada soo socda oo aan xilli la qaban doono aan la baahin. Qodobada xeerka qabyada ah ayaan warbaahinta lala wadaagin.
No comments MAQALLE – Ururka TPLF, oo ah ka ugu tunka weyn EPRDF, ayaa sheegay in cadowga gudaha iyo ka dibadu aanay marna ka leexin karin ujeedadooda ah in uu meelmaro dasduurka dalku. Ururka ayaa hadalka ka sheegay munaasabad ku aadan xuska 42-aad ee asaaska jabhada.
Qoomiyada Tigreega ee uu ururku matalo ayaa dareentay kacdoon ka dhan ah oo ay wadaan qoomiyadaha kale, gaar ahaan Oromada iyo Axmaarada kuwaas oo rumaysan in qoomiyada Tigreegu ay ku tagrifalayso awooda iyo dhaqaalaha dalka islamarkaana gacan bidixaynayso qoomiyadaha kale.
Warbixinta ayaa lagu xusay in ururka xaliye wax lagu sheegay dhibaatoyinkii salka ku haye horumarinta wadanka, balse lama soo hadal-qaadin khilaaf siyaasadeed oo la sheegay inuu ka dhax aloosan yahay xubno jabhada ah.
Xuska asaasaka jabhada ayaa sanadka ku soo beegmay xilli dalku ku jiro xaalad degdeg ah iyo iyada oo ay sii xoogaysanayaan dareenka jabahada laga soo horjeedo ee ka jira gobolo badan oo dalka ah.
EPRDF ayaa horey u tilmaantay inay jiraan masuuliyiin ku sifoobay musuqmaasuq, ku tagrifalka awooda, eexasho iyo khayraadka dalka oo si siman aan loo isticmaaleen. Jabhada ayaa isku-shandahyn ku samasay gollaha wasiirada iyo maamulada 4-ta ee ay ka kooban tahay EPRDF.
Mucaaradka wadanka ayaa sheegay in loo baahnyahay isbal ka weyn isku-shandhayn kaasoo ah in dalka laga qabto doorashooyin xor ah, laakiin ururka EPRDF ayaa taladaas diiday.
Warbixinta TPLF ayaa lagu tibaaxay in jabhadu garab taagan tahay qoomiyadaha iyo shuucabta kale ee Itoobiya.
ITOOBIYA OO SHEEGTAY IN QAYBINTA RAASHINKA IYO BIYAHA LOO QOONDEYE DADKA ABAARTU KU DHACDAY AYNA HAWL FUDUD AHAYN
No comments ADDIS ABABA – gudoomiyaha koomishinka ka hortga iyo maaraynta masiibooyinka, Mitiku Kassa, ayaa sheegay in qorshihii dawladu u dajisay hawlaha gargaarka uu si wanaagsan u socda.
Kassa ayaa dhanka kale qiray inay aad u adag tahay in raashin iyo biyo la gaadhsiiyo dadka xoolo-dhaqatada oo ku baahsan dhul baaxadiisu balaadhan tahay. Waxa uu sheegay in xukumadiisu ka baaran-degeyso hab kale oo loo gargaaro dadka reer guuraga ah.
Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in biyaha la tashiilayo islamarkaana la qodayo ceelal dhaadheer. Waxa uu intaa ku daray, in xoolo-dhaqatda lagu soo ururinayo meelaha biyaha iyo daaqa leh.
Dadka Soomaalida ah ee DDSI ayaa dhaqan ahaan xoolahooda ula guura marba meeshii ay ka heli karaan daaq iyo biyo iyada arrintaas aanay ahayn wax hadda la barayo.
Dawlada dhaxe iyo dawlad-goboleedyada ayaa lagu eedeye inay dhayalsadeen baaxada abaarta iyada oo gargaarku aad u yar yahay islamarkaana lala soo raagay.
Ismaamulka Soomaalida ayaa waxaa ku yar gaadiidka biyaha lagu dhaameyo taas oo keentay inay biyo la’aan u silcaan dad farabadan oo ku nool dhulka durugsan ee miyiga ah.
Inkastoo xukuumada DDSI iyo dawlada dhaxe maaliyn birr u qoondeeyen abaaraha, haddana waxaa muuqata in laga maarmi waaye taageerada qurba-joogta iyo ganacstada . Quraba-joogta ayaa si dadban ugu dira qaadhamo la isku ururiye oo dadka ay abaaruhu taabteen, si biyo iyo baad loogu iibiyo.
Sidoo kale, xukuumada Jigjiga ayaa sheegtay inay gancstadau ku deeqday 32 miliyan oo birr inkastoo dadka qaar sheegayaan in ganacstada lagu xukumay lacago awoodooda ka baxsan.
Koomishinka ka-hortaga masiibooyinka ayaa xoolo-dhaqatada u soo jeediye inay xoolaha qaarkood iska iibiyaan ama la gawraco si loo keydsado. Kassa ayaa sheegay in hay’adaha dawliga ahi sida jaamacadaha ay iibsadaan xoolaha.
Gudoomiyaha ayaa amaan u soo jeediye xoolo-dhaqatada Soomaalida oo uu sheegay inay xoolo badan gawracaan islamarkaana hilibkooda qalajiyeen si mustaqabalka loo adeegsado. Kassa ayaa ka hadlaya habaka Soomaalidu u sameyso muqmada isaga oo xoolo-dhaqatada kale ugu baaqay inay ku deydaan Soomaalida.
Itoobiya ayaa xustay in dalalka Sweden iyo Australia ay ku yabooheen lacag malaayin ah oo lagu kaalmeeyo dadka abaaraha ku tabaaloobay, balse weli loo baahan yahay kaalmo dheeraad ah.